Pet Rescue Saga Facebook – Mihoatra ny 10 olona an-tapitrisany no efa milalao ny Pet Rescue Saga Facebook lalao.
Pet Rescue Saga, avy amin'ireo mpamorona ny Candy Crush Saga & Saga Heroes Farm!
Ampifanaraho ny blocs mitovy loko roa na maromaro hanadio ny haavony ary hamonjena ny biby fiompy amin'ny Pet Snatchers ratsy.! Voafetra ny hetsika ka alamino tsara. Ny fahaiza-manao piozila dia hosedraina amin'ny ora fialam-boly manakana ny sakana mihoatra noho ny Candy Crush Cheats!
Nisy ny fiodinana nampalahelo taorian'ny fitsidihan'ny Puppy! Midira hanampy an'i Lady Catalina! Ny Sunny Fields Villa dia misy:
-Ankafizo ny fizarana 'Grand Piano Ballroom’ ary ny 'Moonlight Balcony'! Miaraka amin'ireto LEVELS VAOVAO ireto, misy mihoatra noho izao 4600 ambaratonga mahafinaritra ho anao hankafy 🙂
-Misiona bebe kokoa, Zava-tsarotra, ary tsy ampoizina!
Amin'izao fotoana izao, Facebook izao dia mijanona ho sehatra tsara indrindra hilalaovana lalao mahafinaritra eo noho eo.
Ny sehatra sosialy dia nitohy nivoatra tamin'ny fanolorana ireo mpampiasa azy ny fahatsapana mahafinaritra amin'ny mety ho tsapan'ny milalao lalao mampiala voly.
Betsaka ny lalao vaovao Facebook ambony azo alaina, arakaraka ny safidinao sy ny tsironao.
Na izany aza lalao ady, piozila, lalao mahazatra, lalao ara-panatanjahantena, lalao mihetsika, sns, voasokajy daholo ny rehetra ary tena mahafinaritra ny manao ny andronao.
Ary eto, hiresaka momba ny Playing Pet Rescue Saga isika.
Eto amin'ity ambaratonga ianao hanara amin'ny efatra mitondra biby fiompy ka hatrany ambany noho ny famonjena sy mba hahazoana 20 000 hevitra, afa-tsy io no tena mamitaka ambaratonga izay omena enina biby fiompy hiasa amin'ny, mampalahelo nefa marina, dia afaka hidina eny an-tsisin'ny roa, ary mbola ho izany!
Noho ny antony ny vato ao amin'io ambaratonga dont fotsiny fanampiny mahatratra ny mampahalehibe tsikombakomba, tsy misy firecracker ho earnt sy momba an'ilay vaovao tsara dia tsy misy fetrany ny isan'ny mihetsika.
Metal boaty, cages ary voahidy ny vato hametraka kely ity zava-manitra efa mafana Curry, ny baomba ao fitaratra tranga izay mila manorotoro eo anatrehanao Afaka mampiasa azy ireo ary izany dia tsara ny hevitra (vakio ny hoe 'lehibe hevitra, ataovy fotsiny!') hamotipotika ny baomba misokatra eo anatrehan'i mamoha ny rocks..yeah tahaka ny hita hatrany izao ho diso tena mba afaka nampihena ny afo!
Mitete ny vata vy manodidina ny baomba handringanana azy.
Raha afaka miezaka hanangona ny vata vy manodidina ny baomba izay efa rava nisokatra, izany dia hanampy handringana azy ireo ho indray mandeha sy ho an'ny rehetra. Ny fomba hafa mety ho afaka handringana azy dia ny handao azy ireo tao an-tampon'ny andry iray, ary aoka hatao nandondòna ho tonga toy ny horonam-boky efijery, izany dia mety ho toy ny misy mamitaka na mitady ho zavatra nipetraka teo aminy araka izany no efa akaiky hitranga…na ao amin'ny raharaha raha mbola, Efa hatsipy maro be biby fiompy eny miezaka nitranga ambaratonga ity!
Fa tahaka ny rehetra mamitaka Mpanjaka lalao azo atao! mikendry fotsiny mba hamoronana vato ny loko ary mifidy amim-pahendrena ny hetsika, tsarovy fihetsika rehetra dia vokatry, mahafantapantatra hoe ny fomba tsara indrindra mba hanokatra bebe kokoa ny tsikombakomba no tena fanalahidy ho lalao ity. Amin'ny faharetana kely, be dia be ny vintana, ary be dia be ny tetika ianao ho afaka bazana azy!
Filed Under: Level 69, Uncategorized Tagged: Vonjeo, level 69
Pet fanavotana resabe iny – fa be kokoa noho ny mijery tafiditra!
"I hanorotoro vatomamy sy mitora-pears manodidina, If I wanted to rescue pets I'd head to an animal shelter" tsara izay zavatra mino aho mety ho indray mandeha aho nanao hoe:. If you've ever embarked upon a King adventure then you may have some idea what you are in … [Continue reading]
Zavatra Mandehana 'Boom!’ ~ Pet Rescue manapoaka tsipoapoaka
Ny iray amin'ireo fitaovana mora raisina indrindra no afaka mampiasa in Pet Rescue no Firecracker, Raha mijery tsara ka hatrany ambany ny lamba ho hitanao kely metatra izay tokony sakafo amin'ny hevitra, ny lehibe kokoa ny tsikombakomba ny tsara kokoa. Fill this meter by … [Continue reading]
Filed Under: Game, Vonjeo Tagged: manapoaka tsipoapoaka
General Pet Rescue hamantatra izany sy ny tendron'ny ravin
If you've committed to the Pet rescue voyage here are a few hints, toro-hevitra sy tetika mba hanampy anao eny lalanao! Raha te kely fitiavana tsy maintsy manome kely ny fitiavana! - Spending the time to send your friends lives every time you log in (or a … [Continue reading]
Filed Under: Game, Vonjeo Tagged: hamantatra izany, soso-kevitra, fitaka
Fifampiraharahana Pet Rescue Saga sy Facebook
Koa ankehitriny amin'ny alalan'ny mety ho-kevitra fa tsy ny rehetra no mpankafy ireo lalao, tsara ny very! Problem is many 'anti-gamers' enjoy a good old whinge but there are ways you can keep your appetite for lives and helping hands happily fed and the wingers … [Continue reading]
Filed Under: Facebook Tagged: Facebook, namana, Olona ny
Dia Level 27 manomboka eny tamim-pahatsorana ampy, albeit a little 'Matrix' with the suspended blocks. Misy vitsivitsy Soso-kevitra mora raisina sy toro-hevitra ho an'ny mahazo amin'ny alalan'ny dingana ity amin'ny marina avotra isan'ny biby fiompy sy mendrika isan'ny kintana ho Kiraro! First … [Continue reading]
Filed Under: Level 27, Uncategorized Tagged: Vonjeo, Level 27, soso-kevitra
Oh ry, mamy kely ity lalao efa azonay avy, fa tato ho ato mahaliana! Inona no lozabe ny fikasana hanao mpandraharaha ny Mpanjaka no miandry ireo mahantra mampalahelo biby fiompy manaraka? Level 59 dia tsy manan-tsiny mitady ambaratonga, the pets actually get a break on this one as … [Continue reading]
Filed Under: Level 59 Tagged: mafy, Level 59
Tsara mitsara araka ny antontam-namana no Matoritory eo amin'ny ambaratonga 29 marker I'm going to make a judgement call and say its a tricky one. Amin'ny tanjona ny fanadiovana 99% ny vato sy ny fitadiavam-bola 16 000 points I'm having flashbacks and remembering … [Continue reading]
Filed Under: Vonjeo, level 29 Tagged: level 29
Now don't freak out! Level 43 Toa mampahatahotra ny rehetra fa Bluff, ny kely fishies dia ho azo antoka eo anatrehanao fantatrao izany! Tanjona roa eto dia hamonjy efatra biby fiompy (ny trondro rehetra azonao) ary mahazo, fara fahakeliny, 24 000 hevitra, peice ny mofomamy! … [Continue reading]
Top Pet Rescue soso-kevitra sy ny fitaka
Pet Rescue Saga Level 26 Vonjeo
Download Pet Rescue Saga ny PC